सन्तोष – RANDOM PROBINGS
भक्तपुरको सूर्यविनायक मैले कहिलेकाहीँमात्र टेक्ने गरेको ठाउँ हो। यहाँ मसँग परिचित मानिस भेटिने सम्भावना निकै कम हुन्छ।
एकदिन दिउँसो सञ्‍जोगले यहाँबाट धुलिखेलको लागि गाडी पक्रिनु पर्‍यो।
मैले गाडी पर्खिरहेको बेला एकजना ज्यान परेको हकर छेवैमा उभिएको थियो। उसले निधार छोपिेने गरी रातो रङ्‍गको क्याप लगाएको थियो। उसको हातमा एकबिटो पत्रिका र केही पैसा थियो। दुईटा भरिएका बसहरू त्यहाँ रोकिएका थिए। तर ऊ बसको नजिक गएर पत्रिका बेचिरहेको थिएन। त्यसै अल्मलिएर उभिइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। ऊ घरी-घरी मतिर पनि पुलुक्‍क हेर्थ्यो। पत्रिका किन्ला भन्‍ने आशाले हेरेको होला भन्ठानेर म वास्ता गर्दिनथेँ। यो साँझ पर्ने बेलामा बिहानको पत्रिका कसले किन्दो हो, म मनमनै भन्दैथिएँ।
धेरै परसम्म हेर्दा पनि आइरहेको गाडी नदेखेकोले समयको सदुपयोग गर्न म नजिकको पसलमा गलैँचाको दाम सोध्‍न गएँ। फर्किँदा ऊ त्यहीँ थियो। पर्खेर बसेको पो रहेछ। देख्‍ने बित्तिकै छेउमै आएर बोल्नथाल्यो, “चिन्‍नु भो सर मलाई? प्रोफेसर भइसक्नुभो होला हगि?”
केही वर्ष अघिसम्म म एकजना केटालाई बनेपामा तरकारी र फलफूल बेचिरहेको देख्थेँ।“आ… सर, मलाई त यही काम मनपर्‍यो” भन्थ्यो। उसलाई त्यस्तो काम किन मन परेको हो मैले कहिल्यै सोधिनँ।
केही मानिसहरू केयुले सहरकेन्द्रित र विदेशोन्मुख युवाहरूको जमातमात्र उत्पादन गर्ने गरेकाले देशलाई समग्ररूपमा खासै फाइदा भएको छैन भन्‍ने टिप्पणी गर्छन्। कोहीचाहिँ यहाँ पढेपछि सरासर सफल र धनी बनिन्छ भन्‍ने विश्‍वासले भर्नाका लागि मरिहत्ते गर्छन्। यसरी यहाँ पढेपछि के हुन्छ के हुँदैन भनेर आग्रह राख्‍नु मानवजीवनको समग्रतालाई राम्रोसँग नबुझ्नु हो। कुनै स्कुल वा कलेजले जीवनको एक कालखण्डमा महत्व राख्छ, तर त्यो एकमात्र निर्णायक पक्ष हुन सक्तैन। मानिसहरूले यो कुरा बुझेकै हुनु पर्ने हो।
यसको अर्थ केयुमै पढेका कारणले कसैले पत्रिका बेच्नुपर्‍यो भन्‍न खोजेको होइन। पत्रिका बेचेर जीविका चलाउनु नराम्रो हो भन्‍ने पनि होइन। पत्रिका बेच्ने मानिस अर्को अझ गतिलो काम गरेर बसेको पनि हुनसक्छ। पढेका मानिस सबै जागिरे र हाकिम बन्‍नै पर्छ र बनेकाले पत्रिका बेच्‍नै हुँदैन भन्‍ने झन् होइन। हाम्रो समाजमा कुनै कुनै शिक्षित मानिसहरूले निर्धारित गर्ने सफलताका मापकहरू गजबका छन्। यहाँ भने सानोतिनो काम गर्न इज्जत जाने, बिदेश गएर जेसुकै गर्न पछि नपर्ने अधिकांश शिक्षित वा अर्धशिक्षित नेपालीहरूको सफलताको मापक पैसा र त्यसले किन्‍न सक्ने भौतिक सुविधाहरू हुन्। यी जीविकोपार्जनका प्रमुख साधनहरू हुन्, तर यी मात्र सफल र सार्थक जीवनका निर्णायक आधारहरू भने होइनन्।
प्रचलित दृष्‍टिकोणले सन्तोषको जीवनलाई हेर्दा ऊ एउटा हरूवा र पछौटे लाग्न सक्छ। मैले छोटो भेटमा उसमा पाएको आत्मविश्‍वास र जीवनप्रतिको इमान्दारी भने उदाहरणीय छ। उसको पेशा र अवस्था मेरो लागि अप्रत्यासित थियो भन्‍ने जानी जानी उसले आफूलाई चिनायो। त्यो उसको सामाजिक परिपक्‍वता थियो। युवावस्थाको प्रातकालमा केही समय कक्षाकोठामा देखिएको र अहिले विस्मरणमा गइसकेको एउटा पुरानो शिक्षकसँग लामो समयपछि भेट्दा देखाउन पाएको हार्दिकता भने उसको लागि पनि अविस्मरणीय भएको हुनुपर्छ।
सन्तोषले आई. एस्सी. पास गर्‍यो गरेन, त्यसभन्दा माथि पढ्यो पढेन वा सडकमा पत्रिका बेच्‍न कसरी आइपुग्यो भन्‍ने एउटा खोजको विषय हुनसक्छ। हिजोआज पनि सूर्यविनायकको छेउछाउ पुग्नासाथ म सडकको दायाँ वायाँ राम्रोसँग चिहाउँछु। अनायास उसलाई खोज्छु तर देख्‍दिनँ। भेटेको केही वर्ष भइसक्दा पनि उसको अतीतप्रतिको मेरो खुल्दुली मेटिएको छैन।